Conor McGregor တစ်ယောက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရ။ – SoShwe
Home/Other/Conor McGregor တစ်ယောက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရ။
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 12: Conor McGregor speaks atapost-fight press conference after beating Jose Aldo in their featherweight title fight during UFC 194 at MGM Grand Garden Arena on December 12, 2015 in Las Vegas, Nevada. McGregor won withafirst-round knockout. (Photo by Steve Marcus/Getty Images)
Conor McGregor တစ်ယောက် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရ။
admin March 14, 2019	Other, Sport Leaveacomment
အသက် ၃၀ အရွယ် UFC ကစားသမား Conor McGregor ဟာ ရက်အနယ်းငယ်လောက်က Fontainebleau Miami ကမ်းခြေကနေအထွက် ပရိသတ်တစ်ယောက်က ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်တာကို Conor က ခွင့်မပြုတဲ့အပြင် ထိုပရိသတ်ရဲ့ဖုန်းကိုရိုက်ခွဲကာ ယူဆောင်သွားခဲ့တာကြောင့် Miami ကမ်းခြေရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ကြောင်း PEOPLE သတင်းဌာနက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Conor ဟာ ထိုပရိသတ်ရဲ့လက်ထဲက ဖုန်းကိုမြေပြင်ပေါ်ပစ်ပေါက်ပြီး ခြေထောက်ဖြင့် နင်းချေဖျက်ဆီးကာ ထိုဖုန်းကို ကောက်ယူပြီးထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Conor ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ဖုန်းဟာ ဒေါ်လာ၁၀၀၀ကျော် တန်ပါတယ်။
Miami ကမ်းခြေမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ernesto Rodriguez က “Conor ဟာ ခွန်အားသုံးလုယက်မှု၊ တစ်ပါးသူကိုထိခိုက်နစ်နာစေမှု စတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်တယ်။” လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Conor ဟာ Turner Guilford Knight အမည်ရှိ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာကို ပို့ဆောင်ခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Conor ဟာ အရင်ကလည်း UFC ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Micheal Chiesa ကို ကြိုးဝိုင်းအပြင်ဖက်မှာ ထိုးနှက်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားခွင်ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါသေးတယ်။
Previous အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်။
Next ခွေးလေးကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့တဲ့ တက်ဆက်ပြည်နယ်သား။